टाइफाइड : यसबाट लक्षण र बच्ने उपाय के के हुन् ? – Everest Dainik
टाइफाइड : यसबाट लक्षण र बच्ने उपाय के के हुन् ?
० यो रोग अरूलाई सार्न सक्ने क्षमता जीवनभर राख्न सक्दछ।
नोटः टाइफाइडका लक्षणहरू सधैँ माथी दिए जस्तै हुन्छन् भन्ने होइन । लक्षणहरूको एकदम अनियमित खालको प्रस्तुति रहन सक्छ।
५. गायक लाउर्डेज भान डुनेम् टाइफाइडले सन् २००६ मा मरेका थिए। एजेन्सीको सहयोगबाट